Onye-nwe kwuru na njedebe na ihe mberede ga-abịa | Apg29
Onye-nwe kwuru na njedebe na ihe mberede ga-abịa
Na Ezikiel isi 7, Onye amụma buru Ezikiel amụma ma kwuo banyere oge ihe jọrọ njọ na mbibi na-abịanụ. Ihe ọghọm nke bụrụ ihe pụrụ iche kpamkpam, na naanị ụdị ya
Ezikiel 7: 5 - Otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, ihe mberede biara, nbibi nke udiri ya. Ọgwugwu na-abịa, ee, ọgwụgwụ na-abịa! Ọ na-eteta ma na-abịakwute gị. Lee, ọ na-abịa!
Na Ezikiel isi 7, Onye amụma buru Ezikiel amụma ma kwuo banyere oge ihe jọrọ njọ na mbibi na-abịanụ. Ihe ọghọm nke bụrụ ihe pụrụ iche kpamkpam, na naanị ụdị ya. Ọ na-ekwuwapụta na usoro iheomume nke mmadụ emebiela, na ụbọchị dị, na ngwụcha gafee akụkụ anọ nke mba a. Chineke kwuru banyere ihe otiti na-abịanụ dị ka mma agha, ọrịa na ụnwụ nri. Ọ na-ekwu maka ọnọdụ ebe ike na ụjọ na-akarị, ebe aka ndị mmadụ makpuru na ikpere ha dị ka mmiri. Okwu ndị a emetụtaghị nanị n'oge Ezikiel, kama ha bụ okwu amụma maka oge anyị bi na ya ma na -aga.
FEMA enwetawo ike
FEMA na-anọchi anya Managementlọ Ọrụ Federal Emergency Agency Agency ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na United States na-ebuga na nnukwu ọdachi na / ma ọ bụ agha. Oge izizi na akụkọ ihe mere eme US, steeti iri ise niile edebanyela aka na nkwupụta ọdachi nke onye isi ala na ha nọ n'ọnọdụ mbibi. Nke a pụtara na ọ bụ n'ụkpụrụ FEMA ewerela ụfọdụ akụkụ ma ọ bụ karịa mgbe ọ na-abịa ime mkpebi na ọgụ megide nje corona. Tinyere ihe ndị ọzọ, emeela atụmatụ maka FEMA iji nyochaa ma chịkwaa ihe na ihe ngwongwo na-ahapụ obodo ahụ. Nke a pụtara na na mmemme pụrụ iche, ikike ikike ọnọdụ ibi ndụ nke FEMA na-eweghara, a na-emezi mba ahụ n'ụzọ bụ isi.
Edegharịrị m ụzọ ụzọ United States dị ka ọ na-akwadebe maka nnukwu ọdachi na mba ahụ site na ịtọ ntọala "Fema Camps", nke dị gburugburu United States, nke ọtụtụ n'ime ha yiri mkpo ma ọ bụ ogige ụlọ mkpọrọ. Taa, ha tọgbọ chakoo, mana ha dị njikere ịnabata iri puku kwuru puku ndị mmadụ n'ihe ọghọm ma ọ bụ ọnọdụ chọrọ. Ajụjụ a bụ na a ga-eji ogige ndị a n'ọdịnihu nye ndị mmadụ ahụhụ ma ọ bụ gbuo ha n'oge mkpagbu ahụ, ndị na-ahọrọghị akara anụ ọhịa ahụ.
Mgbe anyị hụrụ ka gọọmentị mba na ndị isi ya si emeghachi omume, ọ bụ naanị imegharị ihe maka ihe gaje ịbịa. Dika oganihu ahụ na-apụta, anyị ga-ahụ etu esi gbanwee mba dị ka steeti ndị uwe ojii, ebe iwu ịmanye ga-eme, ebe ị ga-enwe ohere ịta ndị mmadụ na-adịghị edobe iwu na usoro mgbochi ndị a. Otu egwu ahụ dị na ndị mmadụ taa ga-akarị nke mkpagbu ma ị ga-adị njikere ime ihe ọ bụla iji weta udo. Naanị ndị mmadụ na-agaghị akpọ isiala bụ ndị a bụ ndị mmeri maka Kraịst n'oge ọgba aghara a - ebe ị na-enye ndụ gị nke ụwa, iji merie nke eluigwe.
Steeti iri ise n’okpuru nkwupụta ọdachi na nke mbụ na akụkọ ntolite US | TheHill